खण्डग्रास चन्द्रग्रहणः कुन राशीलाई कस्तो असर ? ~ नेपाली समाचार | Latest News from Kathmandu, Nepal
खण्डग्रास चन्द्रग्रहणः कुन राशीलाई कस्तो असर ?
सबै ग्रहहरु निरन्तर आफ्नो दिसा र गतिमा घुमिरहेको हुन्छ । यही क्रममा जब चन्द्रमा र पृथ्वीको बीचमा राहु र केतु आइपुग्छ, त्यसको कालो धब्बा पृथ्वीमा पर्छ । ग्रहरुको यस अवस्थितीलाई हामी खण्डग्रास चन्द्रग्रहण भन्छौं ।
खण्डग्रास चन्द्रग्रहणमा के गर्ने, के नगर्ने भन्ने कुरा गर्दा कतिपयलाई यो अन्धविश्वास जस्तो लाग्छ । तर, चन्द्रमामा राहु र केतुको जुन छायाँ ग्रह पर्छ, त्यसबाट उत्पन्न नकारात्मक उर्जाले पृथ्वीका प्राणी मात्र होइन, चराचर जगतलाई नै असर पार्छ । यो असर पनि ग्रह अनुसार फरक हुन्छ ।
यसपाली खण्डग्रस चन्द्रगहण राती एक बजेर ४६ मिनेटबाट सुरु हुनेछ । तीन बजेर पन्ध्र मिनेटमा मध्य हुनेछ । यो अवस्था ४ बजेर ४५ मिनेटसम्म कायम रहनेछ । अर्थात कुल अवधी २ घण्टा ५९ मिनेट चन्द्रग्रहण लाग्नेछ ।
चन्द्र ग्रहण लागेको बेला के गर्ने, के नगर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । चन्द्रग्रहण लाग्ने रातको अघिल्लो दिन अपराहन्न ४ बजेर ४६ मिनेटपछि भोजन गर्न निषेध छ । मन्दिर जाने, पूजापाठ गर्ने काम पनि रोक्नुपर्छ ।
कर्कट सुख प्राप्ति
तुला श्री प्राप्ति
धनु र मकरलाई यी दुई रासी वीच ग्रहण लाग्ने भएकाले विशेष गरेर धनु र मकर राशीका व्यक्तिले भोजन नगर्ने । सयन नगर्ने । ओम सोम सोमाय नमः ओम नमो भगवते बासुदेवाय । मन्त्रोच्चरण गर्ने । ग्रहण पछि अर्थात भोलिपल्ट सेतो चिज दान दिनुपर्छ ।